Iincwadi zika-Elena Ferrante: i-super sales pseudonym | Uncwadi lweNdaba
Iincwadi zika-Elena Ferrante
U-Elena Ferrante ligama elinguzenzele lombhali wase-Italiya othe wabonisa umdla kuncwadi lwehlabathi phantse iminyaka engamashumi amabini. Ngaphandle kokuba waqala umsebenzi wakhe woncwadi kwiminyaka yoo-90s, umsebenzi wakhe wakhula ngo-2012 emva kokupapasha. Umhlobo omkhulu, inoveli eyaqala ngayo itetraloji Abahlobo ababini. Kwi-2018, emva kwempumelelo ye-saga, i-HBO yahlengahlengisa i-TV kunye negama lencwadi yokuqala kwaye ukuza kuthi ga ngoku ii-2 zonyaka ziye zasasazwa.
Malunga neminyaka engama-20 kubume boncwadi, umbhali unekhathalogu yeenoveli ezilithoba, ibali labantwana kunye nesincoko. Ukungaziwa kwakhe akukhange kumthintele ekoyiseni abafundi abaninzi e-Itali nakwilizwe liphela. Inoveli yakhe yamva nje, Ubomi bobuxoki babantu abadala (2020), yabhalwa ngu ixesha njengenye yeencwadi ezibalaseleyo ezili-100 zonyaka.
1 Iincwadi zika-Elena Ferrante
1.1 UAmore uyacaphukisa (1992)
1.2 Ifiglia emnyama (2006)
1.4 Ibali lePerduta Bambina (2014)
2 Malunga nombhali, u-Elena Ferrante
2.1 Anita Raja, "umbhali" emva Elena Ferrante
UAmore ukhathazekile (1992)
Yincwadi yokuqala yombhali wase-Italiya, awayinikezela kunina. Yapapashwa eSpain kunye negama Uthando olucaphukisayo (1996), iguqulelwe nguJuana Bignozzi. Yinoveli esetwe eNaples phakathi kwinkulungwane yama-XNUMX, inezahluko ezingama-26 yaye ibaliswa kumntu wokuqala. Kumaphepha ayo Ubudlelwane phakathi kukamama nentombi yakhe buhlobene - uAmalia noDelia-.
NgoMeyi 23, isidumbu sifunyenwe sidada elwandle, emva kokuchonga umzimba kuqinisekisiwe ukuba ngu-Amalia. Ezi ndaba zimbi zifikelela ezindlebeni zikaDelia kanye ngosuku lwakhe lokuzalwa. Into yokuba unina wajika eswelekile yinto awayengayilindelanga ukuba uyazi kanye ngaloo mini.
Emva kwentlekele, UDelia uthatha isigqibo sokubuyela eNaples yakhe yokuzalwa ukuya kuphanda ngesiganeko, njengoko wayemangalisiwe kukuba u-Amalia wayenxibe ibrashi kuphela. Ekufikeni kwakhe esixekweni, akulula ukuba ajamelane nexesha eladlulayo awayezama ngamandla ukulibetha ngoyaba, obo bunzima buntsonkothileyo bobuntwana awathi wagqiba ekubeni abuthintele engqondweni yakhe.
Njengoko etyhila iimfihlelo ezingqonge lowo ungendawo, iinyaniso abazenzileyo ziyavela okusingqongileyo, ubomi bakho kunye ubuntu bakho, ubukrwada obuya kukwenza ubone inyani entsha.
Intombi emnyama (2006)
Yinoveli yesithathu yeliterata. Yaguqulelwa nguCelia Filipetto yaza yapapashwa ngeSpanish ngesihloko Intombi emnyama (2011). Libali elibaliselwa kumntu wokuqala ngomlingisi ophambili wayo, uLeda, kunye omxholo wabo ungowomama. Isakhiwo sibekwe eNaples kwaye sityhila ngaphezulu kwezahluko ezimfutshane ezingama-25.
ULeda libhinqa elineminyaka ephantse ibe ngama-50, liqhawule umtshato yaye lineentombi ezimbini: Bianca noMarta. Uhlala eFlorence, yaye ukongezelela ekunyamekeleni amantombazana akhe, usebenza njengomfundisi-ntsapho woncwadi lwesiNgesi. Ubomi bakho besiqhelo butshintsha ngokukhawuleza xa abantwana bakhe bagqiba kwelokuba bafudukele eKhanada noyise.
Ibinzana lika-Elena Ferrante
Umfazi, kunokuba azive ephoxekile, uyazibona free ukwenza oko ufuna, ngoko uya kwiholide aye eNaples yakowabo.
Ngelixa uphumle elunxwemeni ukwabelana neentsapho ezininzi zasekuhlaleni, hlaziya, ngempazamo, elidlulileyo. Ngelo xesha, uhlaselwe zizinto ezingaziwayo ezifika kwiinkumbulo zakhe, yenza isigqibo esinzima nesiyingozi.
Umhlobo oqaqambileyo (2011)
Yinoveli yokuqala yesaga Abahlobo ababini. Inguqulelo yayo yesiTaliyane yapapashwa ngo-2011. Emva konyaka yaguqulelwa kwisiSpanish nguCelia Filipetto yaza yanikezelwa phantsi kwegama: Umhlobo omkhulu (2012). Iyelenqe lichazwa kumntu wokuqala kwaye lenzeka eNaples kwinkulungwane yokugqibela. Ngesi sihlandlo, ubuhlobo sisiseko sebali, kwaye oku kunabantu ababini abaselula njengabalinganiswa: uLenù noLila.
ULenù noLila bachithe ubuntwana nobutsha babo kwidolophu yakowabo, indawo ehlwempuzekileyo kakhulu ngaphandle kweNaples. Amantombazana akhula kunye kwaye ubudlelwane babo butshintshile phakathi kobuhlobo kunye nokhuphiswano oluqhelekileyo lwaloo minyaka. Bobabini amaphupha abo acacile, baqinisekile ukuba bazoyisa kwaye baphume kuloo ndawo imnyama. Ukufezekisa amabhongo akho, imfundo iya kuba ngundoqo.
Umhlobo omangalisayo (Ababini ...
Ibali le-perduta bambina (2014)
Intombazana elahlekileyo (2014) -isihloko ngeSpanish- ngumsebenzi ophelisa itetralogy Abahlobo ababini. Ibali lenzeka ngenkulungwane yama-XNUMX eNaples kwaye libonisa uLenù noLila ebudaleni babo. Bobabini bathathe iindlela ezahlukeneyo, nto leyo ebangele ukuba baziqelelene, kodwa ibali elitsha leLenù liza kubamanyanisa kwakhona. Ibali lihamba ukusuka kule mini yaba bafazi babini kwaye lenza umva wobomi babo.
ULenù waba ngumbhali owaziwayo, wafudukela eFlorence, watshata waza waba nabantwana. Noko ke, umtshato wabo waqhawuka. Kwelakhe icala, uLila wayenekamva elahlukileyo, akazange akwazi ukuyishiya ilali yakhe kwaye usazama ukulwa nokungalingani okukhoyo apho. ULenù uthatha isigqibo sokuqalisa incwadi entsha kwaye isifundo sambangela ukuba abuyele eNaples, nto leyo eya kumvumela ukuba adibane nomhlobo wakhe kwakhona..
Intombazana Elahlekileyo (Ababini ...
Emva kwempumelelo yesaga Abahlobo ababini, Elena Ferrante thaca Ubomi bobuxoki babantu abadala (2020). Libali elinoGiovanna njenge-protagonist yalo kwaye lenzeka eNaples ngeminyaka yee-90s.. Le noveli ineempawu zobuqu zikaFerrante, owathi kudliwano-ndlebe oluhlangeneyo wathi: “Njengomntwana ndandilixoki kakhulu. Kwiminyaka eyi-14, emva kokuthotywa okuninzi, ndaye ndagqiba ekubeni ndikhule ”.
UGiovanna yintombazana eneminyaka eli-12 ubudala que yeyoohlohlesakhe baseNeapolitan. Usuku lunye weva ngotata wakhe -Ngaphandle kokwazi kwakhe- ukuba yintombazana embi, njengomakazi wakhe uVittoria. Enomdla yaye ebhidekile koko wayekuva, wakwazi ukubona indlela abantu abadala abahanahanisi nabangamaxoki ngayo. Engenelwe kukufuna ukwazi, wagqiba kwelokuba akhangele lo mfazi, ukuze azibonele ngokwakhe ukuba uyise wayethetha ngantoni.
Ngenxa yokungaziwa kwakhe, zimbalwa iinkcukacha zebhayografi ezaziwayo malunga nombhali wase-Italiya. Abaninzi bathi wazalelwa eNaples ngowe-1946 yaye ngoku uhlala eTurin. Kuwo wonke umsebenzi wakhe, waziwa kuphela kudliwano-ndlebe olumbalwa alunike ngee-imeyile.
Anita Raja, "umbhali" emva Elena Ferrante
Kwi 2016, Owasetyhini ogama linguAnita Raja "waqinisekisa" ngeprofayile ye-Twitter ukuba wayengumntu ongeyena mntu.. Ngemiyalezo eyahlukeneyo, lo mntu wavuma ukuba "ngumbhali" kwaye wacela ukuba ubumfihlo bakhe buhlonishwe, emva koko wayicima iakhawunti. Nangona kunjalo, emva kwexesha elifutshane uTommaso Debenedetti - ngelishwa waziwa ngokusasaza udliwano-ndlebe olungeyonyani kunye nabantu abadumileyo - wabanga ii-tweets, ngaloo ndlela edala amathandabuzo ngakumbi.
U-Debenedetti uqinisekisile ukuba udibene noRaja, kwaye wamnika ulwazi. Ngaphandle kwendlela ethandabuzekayo yombhali-ezibiza ngokuba "yiNtshatsheli yaseNtaliyane yobuxoki" - ezinye iintatheli zayiqinisekisa le thiyori. Ukwenza oku, babuza malunga nalapho imali ye-copyright ifakwe khona kwaye ifakwe kwi-akhawunti ka-Anita Raja, enokuqinisekisa ukuba nguye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Iincwadi zika-Elena Ferrante
Ukhetho lwam lweencwadi zonyaka. Uphononongo